28 July 2010 yeyintnge Diary.docx file here28 July 2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/28/20100အကြံပြုခြင်း
KNU Press Release-July 2010
၂၈ . ၇ . ၂၀၁၀
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း / ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၀
ကြံ့ဖွံ့အသင်းဆိုတာကနေ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဆိုတာ ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ အရင်က ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်နဲ့ နေရာတကာမှာ တွင်ကျယ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာဆိုတာဟာလည်း အခုတော့ ကြံ့ဖွံ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ရယ်လို့ ဖြစ်သွားပါပြီ။ (၁၀) နှစ်ကျော် အရေခြုံထားတာတွေ ခွာချလိုက်ကြပြီလို့ဆိုရင် ရမလားပါပဲ။ ဒီနေ့လို ရွေးကောက်ပွဲ ဗ်ိန်းမောင်းသံ၊ လေးခင်းသံတွေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ အမာခံတွေဟာ အပေါ်ကအ၀တ်အစားကိုခွာပြီး လက်ဝှေ့ဝိုင်းထဲကို ၀င်လာ၊ လက်ဝှေ့ရေးပြကြသလား အောက်မေ့ရပါတယ်။ လက်ခမောင်းတဖောင်ဖောင်နဲ့ပါ။ သွားလေရာညောင်မြစ် တဖြာဖြာဆိုတာလို သူတို့ “စည်းရုံးရေး” သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာ ပြဿနာတွေလည်း တက်ချင်တိုင်း တက်နေပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တချို့နေရာတွေမှာ သူတို့ကို လက်နက်ကိုင်တပ်နဲ့တောင် အစောင့်အရှောက်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ မြင်တွေ့ရတာတခုကတော့ နဂိုအမျိုးသမီးရေးရာထဲက ဟန်ရေးပြရုံလောက်သာအသုံးဝင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကတော်တွေဟာ ဒီအဆင့်မှာ ဘေးထွက်ထိုင်လိုက်ကြတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒ်ီကတော်တွေလိုပဲ အရင်က ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် အထွက်မှာတော့ ကတော်တွေလိုမဟုတ်ဘဲ ကန်ထုတ်ပစ်တာ ခံလိုက်သူတွေကတော့ နဂိုကကြံ့ဖွံ့ထဲကို အတင်းမ၀င်မနေရဆွဲသွင်းထားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမ၀င်၊ အလိုမရှိတော့ပြီမို့ အခုတော့ သူတို့ကို စစ်ဗိုလ်တွေက စာရင်းထဲ မထည့်တော့ပါဘူး။ နဂိုက (၂၃) သန်းကျော် ရှိတယ်လို့ ဗိုလ်သန်းရွှေပါးစပ်က ကြွားနေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းကနေ တနေ့ကတော့ ကြံ့ဖွံ့မှာ ပါတီဝင် (၈) သန်း ရှိသေးတယ်လို့ ကြုံးဝါးတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နဂိုကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင် (၁၅) သန်းလောက်ကို ခါထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
တချိန်ကတော့ နိုင်ငံတကာပါတီပေါင်းစုံအစည်းအဝေးတွေ၊ အမျိုးသမီးအစည်းအဝေးတွေတက်ခဲ့တဲ့၊ ပြည်တွင်းမှာ ညီလာခံတွေ အချီချီလုပ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ကြီးတွေဟာ ဘာညီလာခံ၊ ဘာအစည်းအဝေး၊ ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှမချဘဲ ချက်ချင်း အသွင်ပြောင်းကုန်ကြပါတယ်။ အံ့သြစရာမကောင်းဘူးလား။ မျက်လှည့်ဆရာက လက်ဖျောက်တချက်တီးလိုက်တာနဲ့ ဖားကနေဖွတ်ဖြစ်၊ ဖွတ်ကနေဖားဖြစ်ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နအဖစစ်တပ်ထိပ်သီးတွေရဲ့ လေးလပတ်အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကွေးသောလက်မဆန့်မီ ဆုံးဖြတ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်သန်းပေါင်း (၂၀) ကျော် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီးတခုဟာ ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့လည်း ရေပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့အရုပ်လိုပါပဲ။ ဗိုလ်သန်းရွှေက ပေါ်ဆိုပေါ်၊ ပျောက်ဆိုပျောက်။ အင်း၊ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ သူတို့ပေါ်လာတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲပေါ်လာခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား။ အရှင်မွေးမို့ နေ့ချင်းကြီးခဲ့သလို အရှင်က မလိုတော့လည်း နေ့ချင်းပဲ ပျောက်ရပါတော့တယ်။ တဆက်တည်း ဆက်တွေးမိတာက အခုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေရော၊ နအဖဆီက ‘ပျောက်စေ’ ဆိုတဲ့ အမိန့်မျိုးထွက်လာရင် ဆက်တည်ရှိနေပါ့မလားဆိုတာပါ။ လောလောဆယ်မှာတော့ ပါတီအသစ်ဖွဲ့ချင်သူတွေကို မဖွဲ့စေရဆိုတဲ့ တချက်လွှတ်အမိန့်ကြောင့်မို့ မဖွဲ့နိုင်ဘဲဖြစ်နေတာတွေ တွေ့နေရပြီ။ အဲဒီကနေ တဆင့်တက်တွေးလိုက်ရင် နောင်ရွေးကောက်ပွဲလွန်လို့ လွှတ်တော်ဆိုတာတွေ ဘာတွေပေါ်လာရင်ရော။ ဒီတချက်လွှတ် အမိန့်ပေးတဲ့ အာဏာကြီးဟာ (ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်) တည်ရှိနေဦးမှာလား။ မတည်ရှိတော့ပါဘူးလို့တော့ အာမ မခံရဲ ကြဘူးမဟုတ်ပါလား။
အဲဒါကို တချို့က နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးလို့ ပြောကောင်းပြောကြပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ အဲဒီ ကြံ့ဖွံ့မဟုတ်သူတွေ ခေါင်းခဲနေတဲ့ကိစ္စဟာ ကြံ့ဖွံ့က ဒီလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အရင်းအနှီး၊ အထောက်အကူတွေနဲ့ မတော်မတရား ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ်ဆိုတာ သေချာသထက်သေချာလာတဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ကျမှတော့ ‘အစက ငါမပြောလား’ လို့ သူတို့ကို အပြစ်တင်နေလို့လည်း အပိုပဲဖြစ်မှာပါ။ ကျားနဲ့သမင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြတာကို စောင့်ကြည့် ကြရုံပဲရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အခုတလော ပြည်ပရေဒီယို အသံလွှင့်ချက်တွေမှာ နအဖရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ချစ်တီးခေါင်းသန်းရှာ သလို စပေ့စ်ရှာပုံတော်ဖွင့်မယ့် အဖွဲ့တိုင်းနီးပါးဟာ မီဒီယာတွေကမေးတိုင်း မကျေမနပ်တွေ ပြောထွက်နေကြတာကို နေ့တိုင်းလိုလို ကြားနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တဆက်တည်း သတိထားမိတာက ကြံ့ဖွံ့ကို ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ တဖက် သတ်ပေးထားတာဟာ မတရားဘူးလောက်ပဲ ပြောရဲပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒါကြောင့် မတရားဘူး၊ ဒါတွေအတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာမျိုးတော့ မပြောဝံ့ကြပါဘူး။
ဒီလို အားလုံးက တရားမျှတခြင်းမရှိဘူးလို့ ကန့်ကွက်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာပဲ နအဖဟာ လက်နက်သစ်တခုကို ထုတ် သုံးလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဘာသာရေးလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖဟာ သာသနနုဂ္ဂဟအသင်းဆိုတာကို ဖန်တီးပေးပြီး ကြံ့ဖွံ့အတွက် မဲရှာဖို့လုပ်ပါတော့မယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီး နအဖစစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ရှေးအကျဆုံး မသမာမှုတခု ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်တဲ့နည်းကိုလည်း ချန်မထားဘူးလို့သာ မှတ်ချက်ချရပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ (၂၁) ရာစုနှစ်ထဲမှာကိုပဲ (၁၂) ရာစုနှစ်တုန်းက ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲနေတုန်းပါလားလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးကြားနေရတဲ့ ကြံ့ဖွံ့တွေရဲ့မဲဆွယ်ရာမှာ လက်သုံးစကားတခုကတော့ ‘နောက်တခါ အာဏာသိမ်းတာ မတွေ့လိုရင် ကြံ့ဖွံ့ကိုမဲပေးကြ’ ဆိုတာပါပဲ။ သူတို့အနေနဲ့ မဲဆွယ်ရာမှာ ချော့မြှူတဲ့နည်း၊ ခြိမ်းခြောက်တဲ့နည်း စသဖြင့် နည်းမျိုးစုံ အသုံးပြုနေရာမှာ အခုနောက်ဆုံး ကြားရတဲ့နည်းတခုကတော့ ချော့မြှူတာလား၊ ခြိမ်းခြောက်တာလား အတော်ကို စဉ်းစားရကြပ်ပါတယ်။ ဒီစကားသာမှန်ခဲ့ရင် ကြံ့ဖွံ့တွေအနေနဲ့…
- စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးလို့ အသိအမှတ်ပြုတာလား။
- နအဖစစ်တပ်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့လိုလားတဲ့ အဖြေမထွက်ရင် အာဏာသိမ်းလိမ့်မယ်လို့ အပိုင်ပြောနေတာလား။
- သူတို့ကိုမဲမပေးရင် စစ်တပ်ကို အာဏာသိမ်းခိုင်းနိုင်စွမ်း သူတို့မှာရှိတယ်လို့ ၀န်ခံတာလား။
- ဒါမှမဟုတ် သူတို့နောက်မှာ စစ်တပ်ရှိနေတယ်လို့ ကြေညာတာလား။
ဒင်းတို့အလဟဿပြောနေတာတော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါ။ အကြောင်းရှိမှာပါ။ ဒါတွေကိုကြားတော့ “ပေးနေတုန်းမှာ ပေးတာလေးတွေ ယူထားလိုက်ကြ” လို့ နအဖရဲ့စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သူတွေ၊ “ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တယ် ဆိုသူတွေဟာ ပြည်တွင်းအခြေအနေကို ဘာမှမသိဘဲ ပြည်ပကနေ ရမ်းပြောနေတယ်” လို့ လှမ်းရမ်းနေသူတွေကို သတိရမိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ သူတို့တတွေ ဒီအခြေအနေတွေကို တကယ်မသိတာလားလို့။ သူတို့ပြောတာ နောက်တခွန်းရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါက “ဒီမိုကရေစီကို နောက်တော့မှ တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့သွားကြတာပေါ့” တဲ့။ အာဏာမသိမ်းသေးရင်ပေါ့လေ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/28/20102အကြံပြုခြင်း
Burmese Food Fair & Picnic
Time အချိန် : : 10:00 AM to7:00 PM
Date နေ့ ရက် : : July 31, 2010 ( Saturday )
Place နေရာ : : High Park # Area - 4
(Just across High Park subway station.)
The Burma Canadian Association of Ontario is hostingafood fair to raise
funds for the Association as well as to meet old and new friends.
We hope you can come out and join us for some fresh air, try our delicious
Burmese food and participate in the games with the young ones.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/27/20100အကြံပြုခြင်း
27 July 2010 ဒိုင်ယာရီ
27 July 2010 yeyintnge Diary.docx file download here
27 July 2010 Yeyintnge Diary
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်ထိုးစစ်မှာ စစ်အစိုးရတပ်က ရွာတွေမီးရှို့
ကရင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာ စစ်အစိုးရ ခြေမြန်တပ်ရင်း ၃၇ဝ နဲ့ ၃၆၁ တပ်ရင်း၂ ရင်းက ကျေးရွာ ၂ ရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက် ကရင်ရွာသား ၉ဝဝ ကျော် တောတွေထဲ ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ အဲဒီ စစ်အစိုးရ တပ်ရင်း၂ ရင်းဟာ ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းက သဲဒါဒါးရွာအတွင်းကို မော်တာ လက်နက်ကြီးအလုံးရေ ၄ဝ လောက် ပစ်ခတ်ခဲ့တဲအတွက် ရွာသားတွေ စတင် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီအချိန်လောက်မှာတော့ တပ်ရင်းတရင်းက ရွာထဲဝင်ပြီး ကျန် တပ်ရင်းတရင်းက တောင်ပေါ်မှာ တပ်စွဲထားခဲ့ပါတယ်။ သဲဒါဒါးရွာထဲ ဝင်တဲ့ တပ်ရင်းက ရွာထဲက ရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေ လုယက်ပြီး အိမ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ သဲဒါဒါးရွာက ရွာသား ၆ဝဝ ကျော်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အပြင် ရွာသားတွေဟာ နီးစပ်ရာ တောတွေထဲမှာ ပုန်းရှောင်နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ သဲဒါဒါးရွာက ရွာသားတွေအပြင် အနီးအနား ကျေးရွာတွေက ထွက်ပြေးလာသူတွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် စုစုပေါင်း ၁,ဝဝဝ နီးပါးတောတွေထဲမှာ ပုန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်း ကရင်ပြည်နယ် အရှေ့ဖက်ခြမ်းမှာ စစ်အစိုးရတပ်တွေက DKBA ကရင်တပ်တချို့ကို ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုလို့ ရွာသူရွာသား ၈ဝဝ ကျော် ၉ဝဝ လောက် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်က ဖော့ဖရာမြို့နယ်ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ ကရင်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဝင် နန့်ဖောဂေက ခုလို ပြောပြပါတယ်။
'က္ဆွန်မ မနေ့ညနေက ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်၊ တပ်ခ်ခရိုင်၊ ဖော့ဖရားမြို့နယ်ထဲက မိုးကထရွာ စာသင်ကျောင်းကို က္ဆွန်မ ရောက်သွားတယ်လေ။ ရောက်သွားတော့ အဲဒီမှာ ရွာသားတွေ အများကြီး ရောက်နေတာ တွေ့တယ်။ များသောအားဖြင့်၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေတော့ များပါတယ်။ ရွာသုံးရွာက အိမ်ထောင်စု ၃၈ စု၊ လူဦးရေက နှစ်ရာနဲ့ ဆယ့်ရှစ်ယောက်ပေါ့၊ အဲဒါ က္ဆွန်မ ရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်။ ထိုင်းစစ်တပ်တွေကလည်း ရောက်ရှိလာတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ စာရင်းတွေကို ကောက်နေတာ တွေ့တယ်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံတွေ ဘာတွေလည်း ရိုက်တယ်၊ မှတ်တမ်းတွေလည်း ရိုက်တာ အဲဒါမျိုး တွေ့ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ညနက်ပိုင်းအထိက ထပ်ရောက်လာတဲ့လူ ရှိတယ်လို့ သတင်းကြားတယ်လေ။ ဒီမနက်ပြန်ပြီးတော့ စုံစမ်းကြည့်တာ ၉ဝဝ ကျော်လောက် ရှိလာတယ်။'
မြောက်ကိုရီးယား စစ်ပစ္စည်းများကို တရုတ်သင်္ဘောများဖြင့် မြန်မာပြည်ပို့နေ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့နေတဲ့ နျူကလီယား ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေကို အရင်ကလို မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတွေနဲ့ အသုံးမပြုတော့ပဲ တရုတ်နိုင်ငံက သင်္ဘောတွေကို အသုံးပြု တင်ပို့နေတယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နျူကလီးယားနဲ့ တခြား စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတစင်းဟာ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ညက တရုတ်ရေပိုင်နက်အတွင်း ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တရုတ်သင်္ဘော တစင်းပေါ် ပြောင်းတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီတရုတ်သင်္ဘောဟာ ရန်ကုန် သီလဝါဆိပ်ကမ်းကို အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဝင်ရောက်ဆိုက်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က သိရပါတယ်။ ရန်ကုန် သီလဝါဆိပ်ကမ်းမှာတော့ လုံခြုံရေးတင်းကျပ် ထားတယ်လို့ ဆိပ်ကမ်းနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
အခုလို မြောက်ကိုရီးယားက စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့ရာမှာ တရုတ်သင်္ဘောတွေ ပြောင်းလဲ သုံးစွဲလာတာဟာ နိုင်ငံတကာ ရေတပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ ခြေရာခံ ဖော်ထုတ်မှုတွေကို ရှောင်ကွင်းနိုင်အောင် ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးဌေးအောင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
'အခုလို အရေးကြီးတဲ့ ဒီ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကို ဒီ မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတွေနဲ့ တင်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေက ဒီ နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ ဖိပြီးတော့ အမြဲတမ်း ဒီ အာရုံစိုက်နေတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲလိုအနေအထားမျိုးတွေအရ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမြောက်ကိုရီးယား အနေနဲ့ပေါ့လေ၊ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ဒီ စစ်ပစ္စည်းတွေကို ပေးပို့ဖို့ နေရာမှာ အဲ သူတို့ သင်္ဘောတွေကို သုံးပြီးတော့ ပေးပို့ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနိုင်တဲ့ အနေအထား တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်၊ မြောက်ကိုရီးယား အနေနဲ့ပေါ့လေ၊ ဒီ နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့ ဒီ တရုတ်သင်္ဘောတွေကို ကြားခံ အလွှဲအပြောင်း လုပ်တယ်လို့ ယူဆရင်လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။'
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်း Kang Nam သင်္ဘောအပါအဝင် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ သယ်ယူတင်ဆောင် လာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို အဝင်အထွက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတစင်းကို အမေရိကန် ရေတပ်က နောက်ယောင်ခံ လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီသင်္ဘောဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက် ဆိုက်ကပ်ခြင်း မပြုပဲ လှည့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ-မြောက်ကိုရီးယား စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ရေးနိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးဌေးအောင်ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဆက်သွယ်တင်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အလားအလာများ
အောင်ကျော်ခင် / ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၀
လွန်ခဲ့တဲ့ မေလက ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာနက မြန်မာ့စီးပွားရေးအထူးအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေပြီး ဇွန်လရောက်တော့ သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီ Macquarie တက္ကသိုလ် ဘောဂဗေဒပါမောက္ခ Sean Turnell က မြန်မာ့စီးပွားရေးရာ အချက်အလက်တွေကို ခွဲစိတ်စစ်ဆေးထားတဲ့ Dissecting the Data ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာ (၂၀) ကျော်စာတမ်းကို ထုတ်ဝေလိုက်တယ်။ အခု ဇူလိုင်လမှာ လန်ဒန်အခြေစိုက် Economic Intelligence Unit ဆိုတဲ့ သုတေသနအဖွဲ့က (၂၄) မျက်နှာ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေလိုက်တယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ ရှေ့နှစ်မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အလားအလာ ဘယ်လိုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်ထားတာပါပဲ။ မြန်မာ့အခြေအနေ သုံးသပ်ချက် (၃) ခု ဆက်တိုက်ထွက်လာတာဟာ ထူးခြားပါတယ်။
The Economist မဂ္ဂဇင်းအတွက် သုတေသနလုပ်ပေးဖို့ ၁၉၄၆ မှာ Economist Intelligence Unit တည်ထောင်တာမို့ သက်တမ်း (၆၄) နှစ်ရှိသွားပြီ။ အခုတော့ Economist မဂ္ဂဇင်းအတွက် သုတေသန လုပ်ပေးရုံတင်မကဘဲ သီးသန့်အကြံပေးအဖွဲ့အနေနဲ့လည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ရုံးခွဲပေါင်း (၄၀) ကမ္ဘာမှာ ဖွင့်လှစ်ပြီး ဒေသဆိုင်ရာ အခြေအနေကို လေ့လာနေတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုလည်း လေ့လာထားတာမို့ သူတို့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို ကြားလူရဲ့ အမြင်အနေနဲ့ အကျဉ်းချုံး တင်ပြလိုပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာကြောင့် နိုင်ငံရေးအာဏာချုပ်ကိုင်မှုမှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အလားအလာမရှိပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တရားဝင်အောင်လုပ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ ကွဲပြားတဲ့ သဘောထားကို ဖိနှိပ်ကာ စည်းကမ်းရှိဖို့ အဓိကထားပြီး တဖက်သတ်ထင်သလို စည်းကမ်းသတ်မှတ်တာကို မတရားဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မှတ်ပုံမတင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်တဲ့အုပ်စုနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်အုပ်စုဆိုပြီး အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စစ်အစိုးရကို တရားဝင်ကြောင်း ပြသရာရောက်တာမို့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်မှု လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သပိတ်မှောက်သူတွေက မြင်တယ်။ သပိတ်မမှောက်သူတွေကတော့ တရားဝင် နိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတာလို့ ဆိုတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီမိုကရေစီရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတအဖြစ် ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ရိုသေလေးစားနေကြမှာပါပဲ။ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်တွေကတော့ အကြမ်းမဖက်နည်းနဲ့ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုတယ်။ တချို့ကလည်း လျှို့ဝှက်လုပ်ကိုင်မယ်လို့ ဆိုတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်အချို့ဟာ အမျိုးသားဒီမုကရေစီအင်အားစု (အန်ဒီအက်ဖ်) ပါတီကိုတည်ထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အန်ဒီအက်ဖ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့ ထောက်ခံမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရသွားမယ်ဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ အရေးပါမှုဟာလည်း လျော့နည်းသွားဖွယ်ရာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အန်အယ်လ်ဒီ သပိတ်မမှောက်ခင်ကတည်းက တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တွက်ထားကြတယ်။ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးရေး မဆင်းနိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီလေးတွေ အခက်အခဲတွေ့နေပုံကို ဖော်ပြတယ်။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခ (၃) သိန်းပေးရပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတဦးကို (၅) သိန်းပေးရမှာဖြစ်လို့ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီလေးတွေ စုပေါင်းလိုက်ရင်တောင် ငွေအင်အား လူအင်အားမှာ နအဖတည်ထောင်ထားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မယှဉ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာလည်း ဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်သေးဘူး။
၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန် စစ်တပ်ကထွက်ပြီး ကြံ့ဖွံ့ပါတီတည်ထောင်တာဟာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းမှာ စစ်ဗိုလ်လူထွက်တွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နယ်စပ်မှာ ပြဿနာမဖြစ်လိုတဲ့အတွက် နအဖက အလျှော့ပေးထားပုံရတယ်။ နအဖရဲ့ အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဟာ နအဖအဖွဲ့အတွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ သန်းရွှေကို ရွှေမန်းက ဆက်ခံလိမ့်မယ်လို့ ယူဆနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ ဝေစုမတည့်ရင် ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ နည်းလမ်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ဝေဖန်နေပေမယ့် နအဖက ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဒီလို တဖက်သတ်အနိုင်ကျင့်ပြီး ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမပြု မသိရသေးဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်ပုံဟာ မှားယွင်းနေတယ်လို့ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေက ဝေဖန်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သိသာမြင်သာ ယုံကြည်လောက်စရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေ နိုင်ငံခြားက စေလွှတ်ချင်ပေမယ့် မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်မခံဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတုန်း အဏုမြူလက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြံစည်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အကူအညီရယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို မယုံသင်္ကာဖြစ်လာကြတယ်။ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း ယူဆောင်လာတဲ့ အထောက်အထားတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအားအေဂျင်စီ (IAEA) က စစ်ဆေးနေတုန်းပဲလို့ ယူဆရပေမယ့် ထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုး မလုပ်သေးပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် (၁၈၇၄) အရ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ လက်နက်အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားတာကို နအဖ သဘောတူထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံအချို့ဟာ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို မြောက်ကိုရီးယားဆီက ရယူနေကြောင်း သိရတယ်။ ရုရှားလုပ်အဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို အသေးစားတခု ၀ယ်ယူဖို့နဲ့ မြန်မာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကို သင်တန်းပေးဖို့ ၂၀၀၇ မှာ ရုရှားနဲ့ သဘောတူခဲ့တယ်။ IAEA ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာမယ်လို့ ရုရှားက ဆိုပေမယ့် IAEA ကို စစ်ဆေးခွင့်ပြုတဲ့စာချုပ်ကို နအဖ က လက်မှတ်မထိုးရသေးဘူး။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဆင်းနေလို့ မိမိစီးပွားရေးရှင်သန်အောင် အားသစ်လောင်းတာမျိုး အာရှနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ကြပေမယ့် နအဖကတော့ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ အစိုးရအသုံးစရိတ်မှာ လိုငွေပြနေဦးမှာပါပဲ။ အစိုးရလိုငွေကို ဗဟိုဘဏ်က ငွေစက္ကူရိုက်ထုတ်ပြီး ဖြည့်ဆည်းနေရတယ်။ သူများနိုင်ငံက ဗဟိုဘဏ်တွေလို မြန်မာ့ဗဟိုဘဏ်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ နအဖခိုင်းသမျှ လိုက်လျောနေရတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာပေမယ့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ နှေးကွေးနေတုန်းပဲလို့ သုံးသပ်တယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို ခန့်မှန်းရာမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်သုံးစွဲမှုနှုန်းနဲ့ တိုင်းတာလေ့ရှိတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာတာကိုကြည့်ပြီး မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ တိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။ ဘိလပ်မြေနဲ့ အုတ်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလာတာဟာ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာ အနိုင်နိုင်ရုန်းကန်နေရတာ ပြသတာဖြစ်တယ်။
ပဲမျိုးစုံနဲ့ ဆန်ရောင်းရတာကြောင့် စိုက်ပျိုးလယ်ယာကဏ္ဍဟာ ရှင်သန်နေပုံရတယ်။ နောက်ဆုံးရ စာရင်းဇယားအရ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ဆန်တန်ချိန် (၈) သိန်းနီးပါး တင်ပို့တာသိရတယ်။ တန်ချိန် (၄) သိန်းလောက် ပိုများလာတဲ့ သဘောပဲ။ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့ရာမှာ တင်ပို့တဲ့ပမာဏမှာ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် နည်းသွားပေမယ့် ၀င်ငွေ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် တိုးပွားလာတယ်။ လောင်စာစွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးပွားလာတယ်။ စိုက်ပျိုးလယ်ယာရှင်သန်လာမှသာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး နာလန်ထမှာဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်း ပေါ်ပေါက်လာတာကို ကောင်းမွန်တဲ့ အလားအလာအဖြစ် Christian Science Monitor သတင်းစာက ဇူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့က ဖော်ပြတယ်။
ဒီသတင်းကို ဇူလိုင် (၁၂-၁၈) ထုတ် The Voice စာစောင်မှာလည်း ဖော်ပြတယ်။ အသင်းဥက္ကဋ္ဌဟာ အစိုးရခန့်ဖြစ်ပြီး ဗဟိုကနေ အောက်ခြေကို ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပေမယ့် (၂) နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ မြို့နယ်နဲ့တိုင်းအဆင့် အမှုဆောင်တွေကို အများစုဆန္ဒအရ ရွေးချယ်သွားမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီအသင်းဟာ လယ်သမားလုပ်ငန်း အဆင်ပြေအောင် ဘက်ပေါင်းစုံက ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း၊ ဆန်းစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့ ဆန်စပါးအထူးပြုကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များစုပေါင်းပြီး ဆန်စပါးအသင်းကို ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
နအဖအစိုးရဟာ နေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ရေးကိုသာ ဦးစားပေးပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးကို ဂရုမစိုက်တာမို့ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက် (၈) ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမှုပပျောက်ရေး၊ ကလေးသေဆုံးမှုနှုန်း ကျဆင်းရေး၊ မိခင်ကျန်းမာရေး၊ ကလေးတိုင်း မူလတန်းပညာသင်ကြားနိုင်ရေး၊ အမျိုးသမီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ HIV-AIDS တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိးရေးအတွက် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေး စတာတွေကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂက ရည်မှန်းပေမယ့် နအဖအစိုးရဟာ တခုမှ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။
၂၀၀၉ ခုနှစ် UNDP လူသားရင်းမြစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီရင်ခံစာမှာ နအဖအသုံးစရိတ်ရဲ့ (၂) ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကျန်းမာရေးစရိတ်ဖြစ်နေပြီး အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ပျမ်းမျှနှုန်း ကျန်းမာရေးစရိတ်ဟာ အသုံးစရိတ်ရဲ့ (၇) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်တယ်။ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ဗိယက်နမ်ဟာ မြန်မာထက် အများကြီးသာတယ်။ မြန်မာ့ပျမ်းမျှကြေး လူ့သက်တမ်းဟာ (၆၀) အာဆီယံသက်တမ်းက (၇၀) ဖြစ်တယ်။ အနာဂတ် မြန်မာပြည်သားဖြစ်တဲ့ အသက် (၅) နှစ်အောက် ကလေးထဲမှာ (၃၂) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့နေတယ်။ အသက် (၅) နှစ်အောက်ကလေး (၁,၀၀၀) မှာ (၆၆) ယောက် သေဆုံးနေကြောင်း သိရတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်မှာ စစ်ဗိုလ်ကြီးစိုးနေသမျှကာလပတ်လုံး နိုင်ငံသားတွေ လူညွန့်တုံးနေမှာ သေချာပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်ထိုးစစ်မှာ စစ်အစိုးရတပ်က ရ...
မြောက်ကိုရီးယား စစ်ပစ္စည်းများကို တရုတ်သင်္ဘောများဖြင...